Izibalo ze-Google's Bogus URL Shortener Statistics | Martech Zone
Izibalo ze-Google's Bogus URL Shortener Statistics
UMsombuluko, May 21, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Sibe nesikhathi esimangazayo nekhasimende njengengxenye yokunye analytics ukuqeqeshwa nokubonisana esikwenzayo nenkampani yabazali babo. Njengengxenye yemizamo yabo eqhubekayo, basabalalisa ama-QR Codes, bafaka ikhodi yomkhankaso weGoogle Analytics, bese besebenzisa i- Isifinyezi se-Google URL, ebavumela ngokunembile linganisa amazinga okuphendula emizamweni yabo.
Leli isu eliqinile. Izibalo zizodwa azikwazi ukukunikeza konke okudingayo ngenxa yazo zonke izinhlelo zokusebenza ezisabalalisa izixhumanisi kulezi zinsuku ezingafaki idatha ebhekisa esicelweni. I-Analytics iyazi ukuthi uvelaphi ngamaseva wewebhu atshela ikhasi elilandelayo ukuthi ikhasi lokugcina lalikuphi kanye nalo lonke ulwazi kwiklayenti. Njengoba izinhlelo zokusebenza zingenayo iseva yewebhu… azidlulisi idatha. Njengomphumela, uzofuna ukufaka ikhodi yomkhankaso kuma-URL akho amafushane ngaphambi kokuwasabalalisa. Sisanda kukhombisa ukuthi ungangeza kanjani Ukulandelelwa kwekhodi yomkhankaso weGoogle Analytics ngeI-Hootsuite maduzane.
Kodwa-ke, wathola okuthile okwethusayo kakhulu… wathola ukuthi iGoogle inezinkinobho zokuchofoza ezenzekayo ngaphambi kokuthi isixhumanisi sidalwe! Nabu ubufakazi - ngqo kunjini yokubika yeGoo.gl:
Futhi akwenzekanga kanye nje… kugcwele yonke indawo!
Kuyishwa ukuthi le datha ayinakuthenjelwa kuyo… kepha ayinakuba njalo. Ngokusebenzisa i-interface, awukwazi ukukhetha amabanga wamadethi, ngakho-ke uKevin kufanele ahudule ngesandla igundane lakhe kumashadi ukuze athathe izinsuku nezinkinobho zokugcwalisa ukubika kwakhe. Kuyangimangaza ukuthi iGoogle ayifaki nje ukufinyeza kwabo nge-Analytics yabo bese ibhalisa imikhankaso ngokuzenzakalela. Ngimangele kakhulu, kulolu suku nakulesi sikhathi lapho sidinga ukucwaninga ngokusebenza kwesayithi lethu, ukuthi yiphutha elingakanani leli phutha!
Noma ngubani uyazi umphathi womkhiqizo ngakuGoo.gl ongachaza lokhu?
Tags: goo.glisifinyezi se-url ye-googleukubikai-url shortener
Gxila Ngokujulile Emiphumeleni Yakho Yocwaningo: I-Cross Tab ne-Filter Analysis
I-MindMapping kanye nokuBambisana kweBhizinisi
May 1, 2016 ku-5: 35 PM
Nginenkinga efanayo ngenkathi ngizama ukukala umthelela kwezinye iziteshi. Bengilokhu ngibheka lezo zihloko ngamaqembu weGoogle nakwezinye izinkundla nama-blogs kepha angitholanga lutho oluwusizo.